HD Video Ihe Ntụgharị Pro n'efu maka obere oge | Esi m mac
HD Video Ihe Ntụgharị Pro n'efu maka obere oge
Ọ dị ka n’izu gara aga ndị mmepe ngwa niile na-enye anyị ohere ịtụgharị vidiyo na ụdị ndị ọzọ ekwenyela ịnye ngwa ha n'efu nwa oge na Mac App Store. Taa bụ ntụgharị nke HD Video Ihe Ntụgharị Pro, ngwa nke na-enye anyị ohere ịgbanwe ụdị vidiyo ọ bụla na usoro ọ bụla ọzọ, gụnyere faịlụ 3D. Ngwa a nwere ọnụahịa oge niile nke euro 24,99 na Mac App Store, ma n'ime awa ole na ole sochirinụ ọ ga-adị maka nbudata n'efu, yabụ egbula oge n'iji onyinye a mee ihe.
HD Video Ihe Ntụgharị Pro na-enye anyị ohere, dị ka ọtụtụ ngwa nke ụdị a, iji tọghata usoro vidiyo na vidiyo ọ bụla ka e wee nwee ike igwu ya na usoro ọ bụla ọzọ ebe faịlụ a ga-atụgharị adịghị dakọtara. NAỌrụ nke HD Video Ihe Ntụgharị Pro dị mfe. Ozugbo anyị na-agba ọsọ ahụ, anyị ga-ahọrọ faịlụ iyi sitere na ndekọ ebe ọ dị. Ọzọ anyị ga-ahọrọ usoro mmepụta nke faịlụ ahụ, na-ahọrọ ikpo okwu ebe anyị chọrọ ile ma ọ bụ gee ya, ọ bụrụ na ọ bụ usoro ọdịyo.
Naanị usoro nke arịrịọ a adabaghị bụ MTS. Iji tọghata a video format ọ bụla ọzọ, otu Mmepụta na-enye anyị free ngwa MTS M2TS Ntụgharị Pro, nke na-enye anyị ohere ịgbanwe ụdị usoro vidiyo na usoro ọ bụla ọzọ. Buru n'uche na ọtụtụ ndị editọ vidiyo anaghị akwado usoro a, nke a ka na-eji taa n'agbanyeghị enweghị nkwekọrịta ọ na-enye ndị isi nchịkọta vidiyo. Dị ka HD Video Ihe Ntụgharị Pro, ọ dị maka nbudata n'efu maka obere oge.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » HD Video Ihe Ntụgharị Pro n'efu maka obere oge
uru 15 ego. n'efu n'efu.
Alvaro Quezada oyiyiebe dijo
Ee ọ bụghị n'efu
Zaghachi Alvaro Quezada
'Tomb raider' na 'Tomb raider: Underworld', ọnụahịa belata maka obere oge